Kushambadzira Real Estate Pamhepo Kuchinja | Martech Zone
Kushambadzira Real Estate Pamhepo Kwakashanduka
Muvhuro, July 6, 2009 Chipiri, Kurume 1, 2016 Douglas Karr
Iyo Real Estate indasitiri yaita shanduko hombe nekuda kweyeimba bubble (inofungidzirwa pano), tekinoroji shanduko, uye nekuwedzera kutonga kwekutsvaga online. Iyo bubble pamwe nekukwira uye kusinganzwisisike kwakadzika kudonha kwemusika wekutengesa imba zvakamanikidza vatengesi vezvivakwa kuti vachenjere nehupfumi hwavo hwekutengesa.
Tekinoroji yachinja futi, zvakadaro. Kubatanidza nhare uye matekinoroji epamhepo anopa masystem anopa real estate vamiririri zvikumbiro zvine simba, kusanganisira chaiwo dzimba dzekushanya, nharembozha yekutengesa zvivakwa, uye odhiyo edzimba edzimba. Aya masisitimu anga asingakwanise kune Real Estate Mumiriri makore mashoma apfuura - mumiriri aifanirwa kunge achibatanidza masimba pamwe nemamwe makwikwi pane kuve neyake application ivo pachavo.
Kunyangwe Google yakapinda mu Real Estate mutambo muna Chivabvu apfuura. Agents uye yavo zvivakwa zvinogona kuendeswa kuGoogle Mepu Real Estate. Dzvanya paKutsvaga Sarudzo chinongedzo kurudyi kweKutsvaga Mepu bhatani uye kudonhedza pasi runyorwa kunoonekwa Sarudza Musha uye iwe unowana chikumbiro chakasimba.
Zvinopfuura makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana zvekutsvaga kweInternet pane "real estate" uye nemimwe mitauro inoenderana inoitiswa paGoogle nenzvimbo dzevamwe, maererano neGoogle. Kusundidzira data kuGoogle kunogona kutoitwa muchina uchishandisa iyo Google Base Dhata API.
Tags: google base data apiGoogle +kutsvaga kumbamobile real estatemushakushanya chaiko
Usashandise zvakawanda paWebhu Rako Dhizaini
Yenguva Yakareba Strategic Kushambadzira kunotora Kushinga
Jul 7, 2009 na7: 38 PM
Chinhu chimwe chete chandingataure - zvikasadaro inonakidza chirevo: SMS iri kuwedzera kukosha kune nharembozha nzvimbo. Kushandisa kuri kumusoro uye kukwira, uye kana kuchisanganiswa nharembozha webhu, tarisiro uye RE nyanzvi vari kunyatso kuwana zvakanakisa zvemazuva ano zvekutengesa tekinoroji. Ah, uye ini zvinoitika ndichishandira kambani inoita izvi. B)